Safarkaygii Jigjiga : Degaan Nabad ah, Hogaan daacad ah iyo Dadweyne Isku-Duuban waa Mid ku Dayasho mudan! - Cakaara News
Safarkaygii Jigjiga : Degaan Nabad ah, Hogaan daacad ah iyo Dadweyne Isku-Duuban waa Mid ku Dayasho mudan!
(CakaaraRa’yiga) Khamiis July 04,2013.Qormadan waxay tilmaamaysaa Isbedelada iyo xawliga horumarineed ee ay Xukuumada DDSI mudo yar gudahood ka taabogalisay Deegaanka taasoo dalalka deriska iyo deegaanada federalka itoobiya ay ka marag kaceen xawliga horumar,kobac dhaqaale ee ay hirgalisay xukuumada manta hogaanka u haysa deegaanka soomaalida itoobiya,hadaba waa kan mid ka mida aqoonyahanka somi-land oo qaadaa dhigaya waxa uu ku arkay deegaanka soomaalida itoobiya mar uu Sharciga Dal-ku-galka ka soo qaatay Safarada Itoobiya ay ku leedahay Hargaysa.
Waxay ku beegnayd 28 June 2013 , maalin Jimce ah Abaarihii 9kii Subaxnimo markii aan ka soo jarmaaday Caasimada Somaliland ee Hargeysa aniga oo wata gaadhigayga yar (taxi ) una sii jeeday Magaalada JIGJIGA Xarunta Dawlada-degaanka Somalida Ethiopia. Waxaan haystay ogolaanshaha dal- ku –galka aniga iyo gaadhigayguba,. Marka hore waxaa mahad iska leh Alle (swt) .
marka labaadna Maamulada labada Dal Somaliland iyo Ethiopia iyo waliba Masuuliyiinta Safaarada Ethiopia ku leedahay Hargiesa oo suurta galiyey jawi xidhiidh, is-dhexgal iyo walaaltinimo dhexmarta bulshada labada dhinac Dhawr jeerna ay DDSI iyo S/L ka wada hadleen Shuruucda Dalku-galka iyo xidhiidhka. Waa guul iyo wax lagu farxo in aan aniga oo wata gaadhigayga yar aan ku maro Ethiopia meel walba oo ay dani iga gasho inta aynan iga Dhmaan Mudada fasaxa aan u haystay iyada oo taas ay ii dheerayd soo dhawaynta iyo ixtiraamka ay ii muujinayeen masuuliyiinta hay’adaha wada-marista ee goobaha check-points(Immigration) iyo xarunta Dawlada Deegaanka Soomaalida Itoobiya ee jigjiga ba. Ha usoo noqdo tuducda qoraalkaygan; waxaan jecelahay inaan halkan kusoo bandhigo isbedelada balaadhan ee dhinacyada kala duwan leh ee aan kusoo arkay DDSI gaar ahaan Xarunta Jigjiga, iyada oo ay iigu dambaysay ama safarkii u dambeeyey ee aan ku tagaa ku beegnaa 3 sanno ka hor.
Arinta kowaad, Degaanada Maamulka Somalida Ethiopia oo dhawr sano ka hor ahaa ka ugu hooseeya dhinaca horumarka marka loo eego inta badan kililada 9 ah ee ay ka kooban tahay Dawalda Federaalka Ethiopia, iyada oo ay sababtuna ahayd dagaalo ay abuureen Ururo Nabadiid ah oo ay maamuladii hore ku fashilmeen inay soo xero-galiyaan , haseyeeshee Maamulka hadda ka taliyaa degaanka ku guulaystay maxsuulkii kasoo baxayna dhaliyey inuu Degaanku cagta saaro Jidkii Horumarka iyo Barwaaqada.
Nabad kaliya horumar Dal ama Dad kuma yimaad hadii ayna helin Hogaan daacad ah , karti iyo Aragti fog leh oo salka ku haysa inuu dalkiisa iyo dadkiisa ka saaro xaaladaha adag gaadhsiiyana horumar iyo barwaaqo. Waana fursada sahasho in Shacabka xilka uu u hayo iyo bulshada caalamkaba lagu kasban karo islamarkaana fure u ah wadashaqayn iyo in la isla garab taago HIIL IYO HOOBA.
Maxaan soo arkay?
Waxaan soo arkay degaan isbedelay , hadii ay tahay isgaadhsiinta jidadka oo sahasha “arbitration” degaamaynta degaamada dal leeyahay ama bilicda caasimadaha iyada oo ay caasimada dal ay tahay muraayada ama halka ugu muhiimsan ee laga dheehan karo wadankaas. Haddaba, jidadkii aan sii maray intaan kusii jeeday caasimada Jigjiga iyo gudaheedaba waxaan dareemay isbedel iyo muqaalo jidad aad u quruxsan iyo dhismayaal dabaqyo dhaadheer iyo kuwa gaagaaban ba leh oo si qorshaysan looga bineeyey Xarunta jigjiga.
Isbedel balaadhan oo ku yimid dhinaca Waxbarashada iyada oo laga hirgaliyey hal(1) Jaamacad oo wayn iyo Lix(6) Kuliyadood oo leh takhasusaad kala duwan. Xarumo caafimaad oo leh Qalab iyo adeegyo aad u sareeya. Shacab niyad wanaagsan oo ay isbedeshay noloshoodii kuna faraxsan horumarka u curtay sanadihii ugu dambeeyey. Ganacsi kala duwan iyo wax is-waydaarsi baaxad leh oo aad uga duwan sidii aan hore ugu ogaa. Maxaan soo ogaaday? Waxaan soo ogaaday in muwaadiniintii u dhashay ama kasoo jeeda Degaanka Ismaamulka Somalida Ethiopia sida Qurba –joogta iyo Ganacsatadu ay qayb libaax ka qaateen isbedelka ka dhacay degaanka, iyaga oo si aan hagrasho lahayn dhinac walba u maalgaliyey degaanadooda Badhi-gantaal Horumarineedna ku kabay Qorshyaasjha iyo isbedelada horumarineed ee ay xukuumada maanta ka jirta DDSI ugu hagar baxday.
Maxaan soo xaqiiqsaday?
In Xukuumada Dawlad-degaanka Somalilada ee uu hormoodka u yahay Madaxweyne Cabdi Maxamud Cumar ay dajisay siyaasad cad oo horumarineed oo ku salaysan “ five year Strategy plan” . iyo in nidaamka maamul ee dawlada uu hogaamiyaa tahay mid ku shaqaysa“ transparency & Accountability” . sidoo kalena in maamulkiisu ka hawl-galay dhiirigalinta Qurba-jooga iyo Ganacsatada iyo waliba inay u dajisay qorshayaal loogu fududaynayo inay maalgashadaan dalkooda. Gabagabadii ; Dawlad –degaanka Somalilada Ethiopia waa dawlad aynu deris nahay,walaalo nahay oo dhibaatooyinka soo gaadhaa uu yahay dhibaato ina soo gaadhay , horumarka ay gaadhaana uu yahay mid aynu inaguna gaadhnay. Sidaa awgeed, in lagu bogaadiyo dedaalka ay sameeyeen iyo horumarka ay gaadhaan waa mid la inooga baahan yahay.
Aad iyo aadna waan ugu hambalyeynayaa Madaxweyne Cabdi Maxamud iyo maamulkiisa iyo shacabka ku dhaqan gudaha degaankaas iyo dibediisaba. Waana talaabo ku dayasho mudan oo ummad kasta tusaale u ah. Waxaanan leeyahay halkaa kasii wada dedaalka . NABAD IYO HORUMAR Cabdirasaaq Sh Cali Askar Hargeisa,Somaliland Political Analyst